Komishini yeMadhibheti Inoti Iri Kuwedzera Mitemo yeMadhibheti Anoitwa muAmerica
VaDonald Trump naVaJoe Biden
Komishini inoronga madhibheti pakati peavo vanokwikwidza kuve mutungamiri weAmerica, yeCommission on Presidential Debates (CPD), yazivisa kuti iri kuwezera mitemo inofanirwa kutevedzerwa neavo vanenge vachiita madhibheti.
Izvi zvinotevera mushure medhibheti pakati paVaDonald Trump, ve Republican Party uye vari mutungamiri wenyika, naVaJoe Biden, ve Democtratic Party, risina kufamba zvakanaka nemusi weChipiri manheru mudunhu re Ohio.
Mudhibheti iri, VaTrump vari kunzi vaindira kazhinji panguva iyo VaBiden vakange vachitaura uye vasingateereri kumukokeri wedhibheti iri, Chris Wallace, anoshanda kunhepfenyuro ye Fox News.
Vanhu havana kupihwa mukana wekunzwa zvirongwa zvinoda kuitwa nevakwikwidzi ava kana vakakunda musarudzo sezvo pakange paine kutukana, kushorana nekupindira mumwe achitaura uye pasina kuteerera zvaitaurwa nemukokeri wedhibheti iri.
Mushure medhibheti iri, vanhu vazhinji vakanyora paSocial Media vachishora mafambiro akaita dhibheti iri, vamwe vachiti zviri nani kuti pachiregerwa kuitwa mamwe madhibheti pakati pevaviri ava.
Asi, CPD yabudisa mashoko ekuti zvakaitika mudhubheti niri zvinoratidza pachena kuti pane mitemo inofanirwa kupamidzirwa mukufambiswa kwemadhibheti aya kuitira kuti zvakaitika nemusi weChipiri izvi zvisaitika zvekare.
Muzvinafundo Elliot Masocha vepaDeVry University kuOhio kwekare, vanoti CPD inogona kugadzirisa zvese zvisina kufamba zvakanaka nemusi weChipiri, vachiti zvinokosha kuti vanhu vanzwe pfungwa dzeavo vanoda kuvatungamirira mune ramangwana.
Vanoti CPD ine simba rekuvandudza zvinhu, vachiti kana pakaitwa mamwe madhibheti, vanotarisira kuti achave nani pane zvakaitika nemusi weChipiri.
Gumiguru 21, 2020
Bazi rezveMutemo muAmerica Roendesa Kambani yeGoogle kuMatare
Kambani yeGoogle inonzi yakurisa
Bazi re zvemitemo, kana kuti Department of Justice, pamwe nematunhu emu America gumi nerimwe, aenda kumatare edzimhosva kwavano mhan'arira kambani ye Google, vachiti yanyanya kukura zvekuti yave kutadzisa mamwe makambani kuitawo basa iri.
Google inopa vanhu mukana wekutsvaka zvese zvavanoda padandemutande..
Hurumende inoti kambani yeGoogle pamwe neyeFacebook, ari kuwana mari inoita zvikamu makumi matanhatu kubva muzana (65%) zvemari yose inowanikwa mubasa rekupa vanhu mukana wekutsvaka zvavanoda padandemutanda pamwe chete nekushambadza, kana kuti “search engine and advertising”.
Kambani yeGoogle inoramba mhosva yairi kupomerwa ichiti zviri kutaurwa nehurumende handizvo, ichiti vanhu vanoshandisa kambani yavo nekuti vanoda kuishandisa, kwete kuti vanomanikidzwa kana kuti vashaya imwe kambani inokwanisa kuvabatsira.
Muzvinafundo Stan Mukasa, vanodzidzisa paIndiana University, mudunhu rePennslyvania, vanoti uku kutashurana kweshoroma, kusinei nevanhu vanoshandisa Google neFacebook, sezvo bazi rezvemitemo iri richida kupatsanura mabasa ari kuitwa neGoogle kuti mamwe awo aitwe nemamwe makambani.
Veruzhinji Vanopiwa Mukana weKubvunza VaTrump naVaBiden Zvavanoda Kunzwa Pamberi peSarudzo
Mutungamiri weAmerica uye vachamirira Republican Party musarudzo, VaDonald Trump nevachamirira Democratic Party, VaJoe Biden
Mutungamiri weAmerica vari ivo vari kumirira bato reRepublican Party musarudzo, VaDonald Trump, nevari kumirira Democratic Party, VaJoe Biden, nezuro vakaita misangano panguva imwechete munzvimbo dzakasiyana vachipindura mibvunzo yeveruzhinji mukutsvaga kwavo rutsigiro masvondo mashoma sarudzo dzichaitwa musi wa 03 Mbudzi dzisati dzaitwa.
Vaviri ava vaifanirwa kunge vakasangana mugakava, asi mushure mekunge VaTrump vazivisa musi wa 02 Gumiguru kuti vakanga vabata chirwere cheCovid-19, varongi vegakava iri vakaita kuti musangano uyu uchiitwa pachishandisswa zvivhitivhiti kana kuti virtual, asi VaTrump vakaramba kupinda mazviri.
Kwakazove nemisangano neveruzhinji mumatunhu ePennsylvania neFlorida, VaTrump vachitevera musarudzo, vave kuedza kushandisa nguva yakarasika. Chiitiko ichi chakaburitswa nenhepfenyuro yeNBC News.
Vachitaura, VaTrump vakati vakanga vari kuNorth Carolina nezuro wakare uko vakaita musangano mukuru kwazvo wekutsvaga rutsigiro wakapindwa nevanhu vakawanda chose, uye vakanzwa zvakanaka chose. Vakatiwo vaive mumatunhu e Florida, Pennsylvania nemamwe ose.
VaTrump vakadzivirirawo matanho avo pachirwere cheCovid-19, vachiti vakamisa kupinda kwendege dzaibva kuChaina (China) mukupera kwaNdira.
Asi mhinduro iyoyo yakasvoropodzwa zvikuru naVaBiden, avo vaivewo mumusangano neveruzhinji waikokerwa naGeorge Stephanopoulos wenhepfenyuro yeABC News.
“Raive basa remutungamiri wenyika kutungamira asi haana kuita saizvozvo. Haana kutaura pamusoro pezvaifanirwa kuitwa nekuti, semaonero angu, aingoramba achishushikana nezvemusika wemari,” VaBiden vakadaro.
VaBiden vakati VaTrump vaifanirwa kumanikidza magavhuna ematunhu pamwe nemameya kuti vadzike mitemo iyo vanoti yaikwanisa kuponesa hupenyu hwevanhu vakawanda.
Vakadomwa naVaTrump kuti vave mutongi wedare reSupreme Court, Amai Amy Coney Barrett, vari mudare reSeneti uko vari kubvunzurudzwa svondo rino, uye kana vakatambirwa, zvinogona kubatsira kuona anokunda musarudzo.
“Zvinenge zviri kwavari. Ndinofunga kuti vanogona kupa mutongo unogona kunditsigira kana kunditsikirira. Handione zvangu paine dambudziko.” VaTrump vakadaro.
VaBiden havana kuzvipira pakuti vachawedzera here huwandu hwevatongi vedare reSupreme Court senzira yekushandura mamiriro akaita vatongi.
Vakati havasi kuzvitevera, uye zvimira nekuti zvinenge zvabuda sei
Vaviri ava vanowirirana pachinhu chimwechete.
VaTrump vakati “Tine sarudzo iri kuuya. Ndinofunga ndiyo sarudzo yakakosha munhoroondo yenyika yedu.”
Ukuwo, VaBiden vakavimbisa kushanda nevebato reRepublican kana vakasarudzwa.
“Nekuti pane zvinhu zvakawanda chose zvatiri kuwirirana mazviri.”
Asi pane zvakaewanda zvinopesanisa mapoka aya. Vanhu vatotanga kuvhota pamberi pesarudzo mumatunhu akawanda uye VaTrump vari kuyambira kuti panogona kuitwa chitsotsi chakakura. Nyanzvi zhinji munyaya dzesarudzo dzinoti izvi hazvisati zvamboitika. VaTrump vakabvunzwa kana vaizotambira zvinenge zvabuda musarudzo.
“Mhinduro inoti hongu, Hongu ndinotambira. Asi ndinoda kuti ive sarudzo inovimbika, zvinove zviri kludiwawo nemunhu wese.”
Vari kukwikwidza ava vari kutarisirwa kusangana svondo rimwe chete kubva iye zvino mugakava ravo ravanenge vari pamwechete rekupedzisira.
Misangano yaitwa naVaDonald Trump naVaJoe Biden Inobudisa Kusiyana Kwevatungamiri Vaviri Ava
Mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, veRepublican Party, naVaJoe Biden, veDemoctratic Party, vaita misangano, kana kuti ‘Townhall’ vachipindura mibvunzo yevanhu vari mumatunhu akasiyana.
Misangano Yaitwa naVaDonald Trump naVaJoe Biden Inobudisa Kusiyana kweMaonero eVaviri Ava
Mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, vebato reRepublican Party, naVaJoe Biden, vachamirira bato reDemoctratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika, vaita misangano vachipindura mibvunzo yevanhu vari mumatunhu akasiyanasiyana.
VaTrump vaita musangano wavo, kana kuti Townhall, kudunhu reFlorida, ukuwo VaBiden vachiitawo wavo vari mudunhu rePennyslavania.
VaTrump naVaBiden vachakwikwidzana musarudzo yemutungamiri weAmerica ichaitwa nemusi wa 3 Mbudzi gore rino.
Nyaya yanyanya kutaurwa pamusoro payo pamisangano miviri iyi ndeye chirwere cheCovid-19 nemabatirwo achakaitwa nehurumende yaVaTrump. VaTrump varumbidza basa ravaita kusvika pari zvino uye mamiriro akaita zvinhu munyika, asi VaBiden varatidza kuve nedzimwe pfungwa panyaya iyi.
VaTrump vasvika padyo nekubvuma kuti vane zvikwereti zvinoita mamiriyoni mazana mana emadhora, nyaya yakazara mumapepanhau uye yavasingafariri kutaura nezvayo.
Panyaya dzezvehutano, VaTrump vati chirongwa chekubatsira vanhu kana varwara, chinonzi Obamacare, vachachibvisa vagoisa chavo chavanoti chiri nani asi havana chavataura kuratidza kuti izvi zvichaitika sezvo vave nemakore vachitaura izvi.
Panguva iyo chirwere cheCovid-19 chave kubata vanhu vakawanda zvekare muAmerica, VaTrump vati nhomba yekudzivirira kutapurira chirwere ichi wave padyo.
Izvi zvinorambwa navanamazvikokota avo vanoti mushonga wekurapa coronavirus uchiri kure uye zvehupfumi hazvina kumira zvakanaka sezvo mamiriyoni mazhinji evanhu akarasikirwa nemabasa avo, uye makambani mazhinji akatovharwa zvekuti haachakwanisi kudzoka.
VaBiden vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo dambudziko guru renyika riri rekushaya hutungamiri.
VaJoe Biden Vachitaura
Kweawa yose, VaTrump havana kupindura zvakakwana, mibvunzo yavange vachibvunzwa kubva panyaya yekushandisa mamasiki, kukurudzira masangano anoda zverusarura, nezvavanoda kuunza kana vabvisa Obamacare.
VaBiden vavimbisa kupa pfungwa yavo pamusoro pekuwedzera huwandu hwemajaji edare guru, reSupreme Court, kana vakakunda musarudzo.
Muzvinafundo Elliot Masocha, vepa DeVry University, avo vange vakatarisa nekuterera vaviri ava vachipindura mibvunzo, vanoti hapana chitsva chabuda kana chataurwa, vachiti chanyanya kuonekwa kusiyana kwevarume vaviri ava mupfungwa nemaitiro avo.
VaMasocha vati VaBiden vakwanisa kuudza vanhu zvavanoda kuzovaitira kana vakakunda musarudzo asi VaTrump vapedza nguva vachingozvirumbidza pachinhambo chekuudza vanhu kuti sei vachida kupiwa mamwe makore mana ekutonga.
VaMasocha vati VaTrump vatambisa mukana wekukurudzira vanhu kuti vashandise mamasiki sezvo ivo vakambobatwavo nechirwere ichi uye apo huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi munyika huchiramba huchikwira.